Emuva ngasekupheleni kwekhulu le-19 Barcelona inkampani Gamo waqala ukwenza phambili amachashazi. Nge izidingo ushintsha ngokuhamba kwesikhathi. Isiphakamiso ukukhiqiza umoya ayo ngezibhamu Gamo yaqaphela imikhiqizo yangempela, owaziwa hhayi kuphela e-Europe kodwa futhi Russia.
Inkampani ithatha isilinganiso indawo phakathi abakhiqizi izikhali womoya kanye izesekeli kuso. Iqiniso zikhona izizathu ezizwakalayo. Umenzi isebenzisa IGT ubuchwepheshe (inert, Gas Technolgy), evumela ukusebenzisa igesi iziphethu ephezulu amandla anele. Ukulawula ikhwalithi kwenziwa lesi sitshalo, okuholela ongaphakeme isici isilinganiso kanye nezikhalo ezivela kumakhasimende.
Gamo emoyeni ngezibhamu zenzelwe njengoba abathandi futhi abazingeli kanye bemidlalo. umthetho Russian ayivumeli ukuba nesibhamu ngaphandle kwemvume ekhethekile. Pneumatics isibe esikhundleni ephelele kulabo ezizoqhubela ukudubula noma efanele wahlanganyela kwezemidlalo nokuzingela.
Spring-piston indaba ephathwayo ukusebenza ezifana onobuhle zakudala ezifana Gamo Hunter, Shado, CFX, Maxima, futhi ohlangothini olusha Gamo Whisper. Gamo emoyeni ngezibhamu eline emehlweni telescopic, ngakho-ke, efanelekayo kulabo nje ukufunda ukudubula. Kungashintshiwe izingalo ibhizinesi khadi lokhu brand luyimfanelo yobuhle umkhiqizo - endabeni ukhuni, avame ukuhlotshiswa ngemihlobiso emihle ebaziwe noma izinga okusezingeni plastic.
I izici eziyinhloko ukuthi ukuhlukanisa Gamo ngezibhamu kusukela mncintiswano zimi kanje:
ezenziwe ngensimbi emgqonyeni izikhali, ephezulu grade impahla embozwe ungqimba zokuzivikela, ukuvimbela okuvela kuyo ukugqwala;
khona isiphethu oqinile;
Uma kukhona izinga kanye izici eziyisisekelo imikhiqizo ngabanye, kufanele ucabangele lolu hlobo njengoba umoya sokuzingela Gamo Shadow SWT. Le modeli ifaniswe zithandwa kakhulu futhi ziphoqa ngenxa inhlanganisela emasikweni isikhali amakhono kanye nokwethulwa ubuchwepheshe obusha. I isibhamu ayikwazi ngokuthi ezishibhile, kodwa intengo akuyona okusezingeni eliphezulu ngakho, ukuze singathwesi ancintisane izikhali elifanayo nezinye abakhiqizi. Ikakhulukazi Shadow RSW idlula wonke amathemba. I isibhamu is cocked ngumuntu ukwa umgqomo, indlela classical, kungaba lapho sibhekane ngokuphumelelayo ngisho imfundamakhwela nokudubula. Yokukhanya evumela ukuba hit ilitshe at amabanga amade, futhi ijubane akuyona ongaphakeme ngakho - kunamasonto angaba amakhulu amathathu amamitha ngomzuzwana. Shotgun kweqiniso kokubili ukuqeqeshwa nokuzijabulisa, futhi ezemidlalo sigameko.
Njengoba for nye izikhali zakudala, emoyeni sokuzingela Gamo Hunter DX ilula ngokwanele ukusebenzisa, kodwa has a pneumatics enamandla kakhulu. Ngenxa rifling Helical e umgqomo, wenziwa ukunemba okuphezulu futhi amandla shot, okuyinto lubaluleke e abazingeli izinyoni ezincane. Khumbula bezikhali sokuzingela ungakwazi, ukuncintisana kwezemidlalo sokudubula futhi ukucacisa yokukhanya, unamathisele inkundla ehlinzekwe ngumkhiqizi.
Gamo emoyeni ngezibhamu ongakhonza zabanikazi isikhathi eside ne okusingathwa futhi ngokucophelela, yokuhlanza esifike ngesikhathi futhi isitoreji efanele.
Ama-movie anesithakazelo nge-Travolta: ukubuka konke
Dzerzhinsky okwami: kanjani lapho, ukuthi ukubona?